नेपालमा २९ हजार ५ सय ३ जना एचआईभी संक्रमित | Safal Khabar
सोमबार, १५ मंसिर २०७७, १६ : १८
काठमाडौँ । नेपालमा हालसम्म २९ हजार ५ सय ३ जनामा एचआईभी संक्रमण भएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले बताएको छ ।
विश्व एड्स दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रकी निर्देशक डा. सुधा देवकोटाले यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संक्रमितमध्ये पुरुषको संख्या १७ हजार ५ सय ८७ र महिलाको संख्या ११ हजार ९ सय १६ रहेको छ । १५ देखि ४९ वर्षको उमेर समूहको जनसंख्यामा एचआईभीको व्याप्तता दर शुन्य दशमलव १३ प्रतिशत रहेको डा. देवकोटाले बताए ।
यस वर्ष मंगलबार (डिसेम्बर १) मा विश्वभर विश्व एड्स दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा करिब ८० प्रतिशत एचआईभी संक्रमण असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट हुने गरेको पाइएको छ । एक वा सोभन्दा बढी एचआईभी सर्न सक्ने जोखिममा रहेका समूहमा एचआईभी संक्रमणको दर ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको तर सामान्य जनसंख्यामा एचआईभी संक्रमण दर १ प्रतिशतभन्दा कम भएको निर्देशक डा. देवकोटाले बताए ।
तथ्याङ्क अनुसार वि.सं. २०७७ असार मसान्त सम्ममा नेपालको कुल एचआईभी संक्रमित मध्ये १९ हजार ४ सय जना अर्थात ६६ प्रतिशत मात्र एआरभी उपचारमा रहेका छन् । सन २०१० को तुलनामा सन २०१९ सम्मा नेपालमा नयाँ संक्रमण ६४ प्रतिशतले घटेको छ । बच्चाहरुमा ८५ प्रतिशतले नयाँ संक्रमणमा कमी आएको पनि डा. देवकोटाले बताए । उनका अनुसार एड्सको कारणले मृत्यु हुनेको संख्या ८५ प्रतिशतले घटेको छ ।
एचआईभी संक्रमितहरुलाई ८० वटा एआरटी केन्द्रहरु र २० वटा एआरभी केन्द्रहरुबाट निःशुल्क औषधि वितरण भइरहेको पनि निर्देशक देवकोटाले बताए ।
यस वर्षपनि ३३ औं विश्व एड्स दिवस २०७७, भोली अर्थात डिसेम्बर १ मा विश्वभर मनाईदै छ । नेपालमा पनि ‘‘एचआईभी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि विश्वव्यापी ऐक्यवद्धता तथा साझा जिम्मेवारी’’ नारा दिएर विश्व एड्स दिवस मनाइँदै छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालबाट कोरोना खोप अभियान सुरु गरिने
कोरोना भाइरसका कारण बेलायतमा मृत्यु हुनेको संख्या ९७ हजार भन्दाबढी
जाडो याममा के के रोगले सताउछ,जानी राखौ सताउने रोगहरु
गण्डकी प्रदेशमा पुग्यो कोभिसिल्ड खोप
एमबीबीएसको शुल्क वृद्धि अस्वीकार्य छ : डा .केसी